के गुगलले युद्धमा अमेरिकालाई मद्दत गर्छ ?
Sunday, 8 Apr, 2018 4:59 PM
वास्तवमा गुगल अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयसँग एउटा यस्तो प्रोजेक्टमा काम गरिरहेको छ जो अमेरिकी सेनालाई सट्रिक ड्रोन आक्रमणको जवाफ दिनका लागी सहयोग गर्न सक्छ । कहिल्यै ‘नराम्रो नबन’ वाक्यको उद्देश्य लिएको एक कम्पनीको लागी यो द्धिविधाको अवस्था हुन सक्छ ।
यहि कारण हो की करिब ३१०० गुगल कर्मचारिहरूले गुगल सिइओ सुन्दर पिचाईलाई पठाएको एक खुल्ला पत्रमा हस्ताक्षर गरेर उनीसँग माग गरेका छन् की मेवेन प्रोजेक्टबाट कम्पनीलाई अलग गरियोस् ।
‘युद्धसँग जोडिएका क्रियाकलापबाट अलग होस्’
यस चिठ्ठिमा कर्मचारीहरूले लेखेका छन्, ‘हामी मान्छौैँ की गुगल युद्धसँग जोडिएका कुराहरूमा गुगलले भाग लिनु हुँदैन । यसकारण हामी माग गर्छौँ, मेवेन पोजेक्टलाई रद्द गरियोस् । एवं लिखितमा एक नीति बनाएर त्यसलाई सार्वजनिक गरियोस् । त्यसलाई कार्यान्वयन गरियोस् की गुगल अनी त्यसको कुनै कर्मचारी युद्धमा प्रयोग हुने कुनै उपाय बनाउँदैन ।’
अमेरिकी अखबार ‘द न्युयोर्क टाइम्स’का अनुसार यस चिठ्ठीलाई समर्थन गर्ने मध्येमा दर्जनौँ चिफ इञ्जिनियर पनि समाबेश छन् । अखबारले यो पनि लेखेको छ की गुगलका कर्मचारी पहिले पनि कम्पनीको शिर्ष व्यवस्थापनसँग नाराबाजी गरिसकेका छन् । गुगलमा संसारभर करिब ८८ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् ।
यस चिठ्ठीमा यो भयपनि प्रस्तुत गरिएको की अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको प्रोजेक्टमा भाग लिनाले कम्पनीको छविमा असर पुग्छ । किनकी यसले कम्पनीले आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्दैन साथै आफ्ना उपभोक्ताको भसोसालाई पनि दाउमा लगाएको हुन्छ ।
चिठ्ठिमा थप लेखिएको छ, ‘गुगलको मूल्यले स्पष्टसँग देखाउँछ की उपभोक्ताले हामीलाई कत्ति विश्वास गर्छन् । जसलाई हामीले कहिल्यै जोखिममा राख्नुहुँदैन । त्यसैले यो प्रोजेक्ट गुगलको प्रतिष्ठाको लागी खतरा छ । यो हाम्रो मुलभुत मान्यताको वितरित छ । यो तरिकाले अमेरिकी सेनालाई सैन्य निगरानीमा सहयोग गर्छ । यसका घातक नतिजा हुन सक्छन्, जुन स्विकार्य छैन ।’
तर मेवेन प्रोजेक्टमा गुगल कम्पनी समाबेश हुनुको के अर्थ छ ?
ज्यानमारा छैन ?
मार्चमा ‘गिज्मोडो’ वेबसाइटमा छापिएको एक शोध रिपोर्टमा जवाफ दिँदै गुगलले पुष्टि गरेको थियो की रक्षा मन्त्रालयलाई आफ्नो केहि तरिका एक सैन्य प्रोजेक्टमा प्रयोग गर्ने अनुमती दिएको छ ।
‘गिज्मोडो’का अनुसार मेवेन प्रोजेक्ट पछिल्लो बर्ष एक पाइलट कार्यक्रम अन्तर्गत सार्वजनिक भएको थियो । जसको उद्देश्य थियो, कृतिम उपायसँग जोडिएका नयाँ तरिकालाई सैन्य प्रयोगमा बढाउने नयाँ तरिकाको खोज गर्नु ।
यस कार्यक्रमको लक्ष्यहरुमा यो पनि समाबेश छ की गुगल ती भिडियो रेकर्डिङको प्रोसेस गर्नेछ जो अमेरिकी सेनाको ड्रोन एवं खोजी उपकरण दैनिक जुटाउँछ ।
यस सन्दर्भमा गुगलका प्रवत्ताले बिबिसीसँग भनेका छन्, ‘मेवेन रक्षा विभागको लागी गर्न लागीएको एक प्रोजेक्ट हो । साथै यसको बारेमा मानिसलाई थाहा छ । गुगलले यसको जुन भागमा काम गर्न गइरहेको छ त्यो अप्रिय छैन । त्यसको लागी यसले एक ओपन सोर्स सफ्टवेयरको प्रयोग गर्छ, जसलाई कुनै पनि गुगल क्लाउड ग्राहकले प्रयोग गर्न सक्छन् ।’
उनले भने, ‘ यो उपलब्ध जानकारीहरुमा आधारित छ । साथै यसको लागी तरिकाको प्रयोगबाट तस्बिरलाई पहिचान गरिन्छ । यसको एकमात्र उद्देश्य ज्यान बचाउनु र मानिसलाई धेरै थकान काम गर्नबाट रोक्नु हो ।’ आफ्ना कर्मचारीहरुले गरेको चिन्ता व्यक्तप्रती क्लाउड बिजनेस म्यानेजर डयान ग्रीनले भने, ‘जुन तरिकामा काम गरिँदैछ, त्यो हतियार वा ड्रोनलाई एक्टिभेट गर्नमा प्रयोग हुँदैन ।’